Iingcebiso zokuQala nge-Instagram kwaye ufumane abalandeli
Disemba 27, 2018 0 IiCententarios 1141
Iingcebiso zokuqalisa kwi-Instagram
Inqanaba lokuqala ekuvuleleni amandla e-Instagram ukuqala ngokwenene. Kwesi sahluko, uya kufunda iziseko ze Iposti ye-Instagram kunye ukudityaniswa kwesithombe Ngamanye amaqonga ezentlalo.
Intshayelelo kunye nokukhutshelwa kwesicelo se-Instagram
Ukukhuphela usetyenziso kulula, kwaye kusimahla. Ungayifumana kwifowuni yakho ngokungena kwiVenkile ye iTunes iTunes okanye ukufikelela kuGoogle Play. Unokukhangela "i-Instagram" kwivenkile yeapp, kwaye uza kubona usetyenziso olunelogo eyaziwayo ye-Instagram. Ngokucofa iqhosha elithi "Faka", sinokukhuphela ngokulula usetyenziso kwisixhobo sethu.
Ungasisebenzisa njani isicelo
Nje ukuba ukhuphele usetyenziso, kufuneka Yenza iprofayili yobungcali yeyakho shishini ngomonde. Kulula kwaye akufuneki koyikise. Ngokulandela amanyathelo kunye nokugcina umzobo wakho ucacile uya kuba nakho ukwakha iprofayile ekhangeleka kakuhle ngokukhawuleza.
Ukwenza igama lomsebenzisi kunye nokubhala i-biography yakho
Instagram Sisicelo se nomphakathi ilula, kwaye ayifuni ulwazi oluntsonkothileyo lwendalo. Igama lomsebenzisi kwiprofayile yakho yenkampani kufuneka lifane nelo ulisebenzise kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo, anjenge Facebook y Twitter.
I-URL yewebhusayithi yenkampani yakho kufuneka ibe yinxalenye yezinto ezinokubonwa esidlangalaleni kwiprofayile yakho. I-150 ikwanayo neempawu ezinde ekufuneka isetyenziswe ngumsebenzisi weshishini ngokupheleleyo.
Isenokubonakala ibophelelekile, kodwa yeyona ndawo ifanelekileyo yokwazisa ishishini lakho usebenzisa amabinzana alula, kwaye injani inkampani yakho, edibeneyo kwaye inolwazi ngexesha elinye. Ungasebenzisa ii-hashtag ezilumkileyo kweli candelo ukulungiselela iprofayile yakho.
Ukukhetha kunye nokumisela umfanekiso weprofayile
Lelona candelo libonakalayo nelibonakalayo kwangoko Iprofayile yeshishini le-Instagram. Ingayimpawu yakho, uphawu lwakho lomzobo, okanye nantoni na ekwenza ukuba ubonakale kwindalo yonke kuwo onke amaqonga akho asekuhlaleni.
Isicelo sinendawo yokusilela yokusika isika ifoto kwisangqa, ke kuya kufuneka ukhethe ukushicilela okungabonakali kubi kwisakhelo esijikelezileyo. Ubungakanani obuncinci bezipikseli ze-110, kodwa zincinci kakhulu ukuba zibonwe kwiwebhu. Qiniseka ukuba ukhetha umfanekiso omkhulu ngesisombululo esiphezulu.
Ungayenza njani kwaye ikhubaze izaziso
Yeyona nxalenye ibalulekileyo yoqwalaselo lweprofayile. Kufuneka uvumele "Isaziso sokuTyhilaNjengoko baya kukwazisa malunga nakho konke ukuthanda, iikhomenti, kunye nabo bonke abalandeli abatsha.
Ukuba umakwe kwifoto, ukuba ikhankanywe ngumsebenzisi omake uphawu lwakho, uyakufuna ukwazi kamsinya nje ukuba yenzeke. Ungabonisa umbulelo wakho kumsebenzisi ukuze Faka uphawu lwakho kwincoko yokunxibelelana kwezonxibelelwano kwaye uqhubeke ngokwabelana ngeefoto zakho, ezivelisa inkqubo yendlela yokuhlangana kwezokuxhumana ezuzisa uphawu lwakho ngokubanzi.
Ulandela njani abasebenzisi kwaye ubalandele
Isitshixo sokwenza uluhlu oluluqilima lwabalandeli kukufumana abachaphazelayo kwishishini eyinxalenye yalo uphawu lwenxalenye. Landela abathengi bakho kunye nabasebenzisi abanomtsalane. Thatha inxaxheba kwincoko ye-intanethi egxile kwii-hashtag ezichaphazelekayo thumela izimvo kwiifoto kwaye ulandele abantu abathatha inxaxheba kwezi ngxoxo.
Yindlela esebenzayo kakhulu yokwandisa isiseko sakho kwezentlalo kwi-Instagram.
Ukongeza igama lomsebenzisi le-Instagram kuyo yonke eminye imimandla yakho yewebhu kunye neeprofayili zilungile kukhuthazo lomnqamlezo.
Nje ukuba ugqibile ukumisela usetyenziso, lixesha lokuba uqale ngokuvelisa umxholo kumsebenzisi wakho. Iifoto ezisemgangathweni ziluncedo kwaye zinokunceda ukuphucula iprofayili yophawu lwakho.
Oku ikakhulu iqonga mobile phone esekelwe. Ke lumka kakhulu xa ukhetha iifoto ezigcina iimpawu zazo kunye nobukhali kwisicelo esiselfowuni. Yabelana ngemifanekiso Ngamanye amaqonga eendaba ezentlalo kulula kwaye kunokwenziwa ngokuchofoza nje okukodwa. I-Facebook, i-Tumblr, i-Twitter kunye neFlickr zidityaniswe kwisicelo sakho.
Ukuba uphakamisa ivenkile yokutyela okanye ikhonkco levenkile elinendawo yalo eyinxalenye ebalulekileyo ye isicwangciso sokuthengisaqiniseka ukuba usebenzisa i-Tag yeNdawo kwiifoto zakho. Khuthaza abasebenzisi ukuba beze kwindawo yakho yokudlela ukuba babelane ngemifanekiso yendawo kwi-Instagram. Ngale ndlela, zonke iifoto ezazithathwe kwivenkile yakho ziya kuba nelebheli efanayo.
Kuya kufuneka ubandakanye uphawu lwakho ngokuphendula izimvo ezivela kubalandeli. Landela abasebenzisi abalandelayo. Gcina umkhondo hashtags ezifanelekileyo onokuzisebenzisa ukwenza incoko; kwaye ujonge abona basebenzisi abazinikeleyo abakungqongileyo. Kunokwenzeka ukuba ukhulise uphawu lwakho ngokuthetha ngalo.
1 Iingcebiso zokuqalisa kwi-Instagram
2 Intshayelelo kunye nokukhutshelwa kwesicelo se-Instagram
3 Ungasisebenzisa njani isicelo
4 Ukwenza igama lomsebenzisi kunye nokubhala i-biography yakho
5 Ukukhetha kunye nokumisela umfanekiso weprofayile
6 Ungayenza njani kwaye ikhubaze izaziso
7 Ulandela njani abasebenzisi kwaye ubalandele
8 Yenza iposti
Phucula ubukho be-Instagram